बेलाको बोली बोल्नेहरु : प्रधानमन्त्रीलाई प्रणाम, मिनेन्द्रलाई सलाम, मनिषालाई सम्मान, रविलाई बधाई, रमेशलाई धन्यबाद ! « Gajureal
बेलाको बोली बोल्नेहरु : प्रधानमन्त्रीलाई प्रणाम, मिनेन्द्रलाई सलाम, मनिषालाई सम्मान, रविलाई बधाई, रमेशलाई धन्यबाद !
प्रकाशित मिति: ९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १९:३७
गम्भीर रोगलाई जितेर आएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी ओलीलाई धेरैले भने- ‘मरिहत्ते गरेर कुर्सीमा किन टाँसिन्छन् होला यी बुढा, आराम गरेर बस्नु नि !’ जवाफमा प्रधानमंत्रीले भन्नु भएथ्यो- ‘म केही गर्नकै लागि बाँचेको हुँ ।’
खोसिएको देशको माटो फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णय देखेर उनीहरु भन्न थालेका छन् – ‘स्याबास् प्रधानमन्त्रीज्यु ! अब उत्साहको साथमा दार्चुलावासीलाई कालीको पानी पिउने अवसर मिलाउनुस् । लिपुलेकमै ठुला होटल खोलेर जीउने अधिकार दिलाउनुस् ! त्यहाँ लिम्पियाधुराको हाम्रै जमिनमा बनेको बाटो भएर मानसरोबर जाने पर्यटकले विश्राम लिउन् ! उचित सेवा सत्कार दिनेछन्, राम्रो फाईदा लिनेछन् । जहिल्यै पनि तपाईँको प्रतिष्ठामा श्री थप्ने काममा राष्ट्रियता नै जोडिएर आउने गरेको छ । त्यसैले तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ, तपाईंलाई फेरीपनी बधाई छ । यो ऐतिहासिक दिनमा आम राष्ट्रप्रेमी को तर्फबाट तपाईँ मार्फत विशेशगरी मा. मन्त्री पद्मा अर्यलका साथै नेपाल सरकारलाई हृदय देखिनै धन्यवाद छ ।
‘माननीय मिनेन्द्र रिजाल
माननीय मिनेन्द्र रिजालज्यू, कालापानीको विषयमा तपाईँको लोली र बोलीमा छन्द नमिलेको गन्ध आयो भनेर यदाकदा टिप्पणी हुँदै थियो तर तपाईँले मरेपछीको ओखती काम लाग्दैन भन्ने बुझ्नु भएछ । बेलाको बोली बोल्नु भएकोछ, मनको कुरा खोल्नु भएको छ । ईण्डियन मिडियाको ‘प्रायोजित कचहरी’मा बोलाएर चौतर्फी घेरा हाली पराईले लछार पछाअर पार्न खोज्दा पनि आफ्नी आमाको अस्तित्व रक्षार्थ विरताका साथ लडाइँ लड्नु भएकोमा तपाईँ धन्यवादको पात्र हुनुभएको छ । परायाले आत्मसमर्पण नगरुन्जेलसम्म हिम्मत नहार्नुहोला । जयनेपालको अभिवादन ।
भनिन्छ, मौकामा हिरा फोड्नु पर्छ । तर, फोड्छु भन्दैमा सजिलै कहाँ पाइन्छ र, समय आउनु पर्छ । समयलाई चिन्न सत्बुद्धि पनि पलाउनु पर्छ । त्यस्तै, नेपाली छोरी मनिषा कोइरालाले हिरा फोड्नु भएको छ । लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालको हो भन्ने कुरा संसारलाई सुनाई दिनुभयो । आफुलाई सच्चा नेपालीको कोटीमा जोड्नु भएकोछ । उनीहरुको भाषामा ‘नुन खाएसी गुन बिर्सनु हुन्न भन्ने छ’ तर नुनको गुनलाई थाँती राखेर एउटै ट्विटले नेपाल आमाको अस्मिता जोगाउन अमुल्य काम गर्नु भएकोमा धन्यवाद ।’
संचारकर्मी रवि लामिछाने
धन्यवाद छ, सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेजीलाई । उता भारतीय मिडियाले हाम्रो उछित्तो काढि रहेकोबेला यता घरानीयाँ सञ्चार माध्यमहरु भने अनौठो मौनता साँधिरहेका छन् । यहि बीचमा तपाईँले पहिलो पटक दुवै देशका सिमा सम्वन्धि जानकारहरुलाई बोलाएर प्रत्यक्ष सम्बाद गराउनु भयो । जसले हाम्रो राष्ट्रियताको मुद्दामा बल पुगेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
अभियन्ता रमेश प्रसाईं
प्रखर युवा वक्ता रमेश प्रसाई जी, तपाईँले भिडियो मार्फत्, विश्वले बुझ्ने भाषामा बोल्नु भयो। भारतीय शासकको मुटु थर्काउने गरी प्रस्तुत हुनुभयो। तपाईंका तर्क, प्रमाण र वाकशक्तिबाट सिमा सम्बन्धि सम्वादमा बस्नुपर्नेहरुले धेरै सिक्नु पर्ने देखिन्छ । तपाईंलाई पनि हार्दिक साधुबाद छ ।
कालापानीको मुद्दामा सरकारको निर्णयको समर्थनमा कलम चलाउने, सामाजिक सञ्जालमा उत्साह भर्ने, राष्ट्रियतालाई सधैँ शीरमा राख्ने सदाचारी जनता सबैको जय होस् । हेप्ने र चेप्नेलाई भय होस् ।